Akụkọ - Ngwa nke eriri osisi n'ime ntụ ntụ ntụ
Ngwa nke eriri osisi na ntụ ntụ ntụ
1. Ihe mkpuchi ụlọ:
◆ eriri ngwa agha ike n'ụzọ dị irè ka elu maka teknuzu arụmọrụ ntụpọ nke ọhụrụ ngwa na mmepe nke oge a engineering teknụzụ dị ka bughi onwe waterproofing na n'elu ụlọ engineering.
2. Njikọta mkpuchi:
◆ ezigbo njide mmiri, nke nwere ike ịgbatị oge oyi ma melite arụmọrụ ọrụ. Mmanya dị elu na-eme ka ngwa dị mfe ma dị nro.
◆ melite shrinkage iguzogide na cracking iguzogide, na melite elu àgwà.
◆ na-enye ihe dị nro na ọbụna udidi, ma mee ka njikọ ahụ sie ike.
3. Ihe ala ala nke onwe:
◆ melite viscosity na enwere ike iji mee ihe dị ka ihe mgbakwunye mgbochi mmiri ozuzo.
◆ welie fluidity na pumpability, nke mere na-eme ka arụmọrụ nke paving dị mma.
◆ jikwaa njide mmiri iji belata mgbawa na mbelata nke ukwuu.
4. Ngwa agha masonry:
◆ welie adhesion na elu nke masonry. Ọ nwere ike ịkwalite njide mmiri ma melite ike nke ngwa agha.
◆ melite mmanye na plasticity, ka ọ dị mma na-arụ ọrụ ihe owuwu, ngwa dị mfe, chekwaa oge ma melite uru bara uru.
5. plasta nke sitere na ciment:
◆ meziwanye otu, mee ka ngwa agha plasta dịkwuo mfe itinye, ma kwalite ikike mgbochi ịdaba n'otu oge. Mee ka mmiri dịkwuo elu na mgbapụta mgbapụta, ka ọ dịkwuo mma ịrụ ọrụ.
◆ elu mmiri njide, ịgbatị oge na-arụ ọrụ nke ngwa agha, melite ọrụ arụmọrụ, na-enyere ngwa agha na-etolite elu n'ibu ike n'oge solidification.
◆ na-achịkwa infiltration nke ikuku, nke mere na iji kpochapụ micro cracks nke mkpuchi na-etolite ezigbo mma n'elu.
6. N'ezie mgbidi ngwa agha elu:
◆ eriri plasta ngwa agha etinyere mgbidi elu nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie mgbidi cracking na nweta mmetụta nke mgbape eguzogide na seepage mgbochi.
◆ eriri ngwa agha elu N'ezie nwere ezi ewu na-emecha ọrụ e ji mara. Ọ dịghị mmetụta na ọdịdị nke ngwa agha elu.
◆ eriri nwere ike ime maka teknuzu ntụpọ nke ọhụrụ fechaa mgbidi ihe ruo n'ókè kasị ukwuu. Ụdị ihe dị iche iche nke ọkụ na-echekwa ike mgbidi nwere ntụpọ nke mgbawa elu na enweghị ike zuru oke na ogo dị iche iche, nke na-emetụta mgbasa ozi na ngwa ha. Mgbe ị na-eji ihe mgbidi ndị a eme ihe, a na-eji ụrọ eriri enyi na-eme ihe dị ka ihe nkedo nke plasta, nke nwere ike mejupụta n'ụzọ zuru ezu maka ntụpọ arụmọrụ ha ma melite ogo ọrụ.
7. Gypsum plasta na ngwaahịa gypsum:
◆ meziwanye otu, mee ka ngwa agha plasta dị mfe itinye, ma melite nkwụsị nke kwụ ọtọ. Mee ka mmiri dịkwuo elu na mgbapụta mgbapụta, ka ọ dịkwuo mma ịrụ ọrụ.
◆ elu mmiri njide, ịgbatị oge na-arụ ọrụ nke ngwa agha na-akpụ elu n'ibu ike n'oge solidification.
8. Thermal ikpuchi ngwa agha isi:
◆ eriri ngwa agha na-eme ka ngwa agha isi oyi akwa kegriiz, na ogbe swing oyi akwa siri ike, idiocha, mara mma na ewepụghị, nke kwesịrị ekwesị maka ụdị ọ bụla nke architectural coatings. Ngwa injinia na-abawanye nke ukwuu nke mkpuchi mgbidi dị n'èzí na-etinye n'ihu chọrọ ihe dị elu maka iwulite ngwa agha. N'ihi na eriri ngwa agha nwere ezi mgbape eguzogide, mmetụta eguzogide na ntu oyi na-eguzogide, ọ nwere ike ukwuu melite ya engineering e ji mara, izute chọrọ nke ewu technology na fundamentally hụ na ewu àgwà.
◆ melite plasta ịrụ ọrụ nke ọma ma belata ọnwụ. Ngwa ngwa eriri dị elu karịa ngwa ngwa ciment dị ọcha na njikọta na nkwụsi ike ya. N'oge a na-ewu ihe nkedo, ihe nkedo dị mfe ma dị ngwa ngwa, na nkwụsị nke ngwa agha na-ebelata nke ukwuu, nke nwere ike imeziwanye arụmọrụ nke plasta ma belata ihe efu.
◆ ọ na-enyere aka hụ na-ewu àgwà nke chere ihu brik elu N'ezie. Ojiji nke eriri ụrọ dị ka isi ihe na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịhụ na ike njikọta nke brik na-eche ihu na igbochi omume nke mgbawa brik na oghere n'ihi mbelata ma ọ bụ na-apụ n'anya nke ihe mgbawa ya.
9. Ihe nrapado tile:
◆ akọrọ ngwakọta dị mfe mix na-enweghị agglomeration, nke nwere ike melite constructability na ibelata na-eri.
◆ site na ịgbatị oge jụrụ oyi, a na-emeziwanye arụmọrụ tiling. Nye ezigbo adhesion.
◆ ọ nwere ike ịkpụ oyi akwa shotcrete.
◆ o nwere elu viscosity.
◆ mbido ụgbọ elu mbụ nke ihe a na-agbapụta bụ nanị 70% - 80% nke ihe ndị ọzọ, nke na-ebelata mmetụta na ihe ndị a na-agbapụta, na-eme ka ike nke ihe na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-ebelata nkwụsịghachi nke ihe ahụ.